‘कलाकार चर्चित हुनु र लोकप्रिय हुनु फरक कुरा हो’ - Naya Page‘कलाकार चर्चित हुनु र लोकप्रिय हुनु फरक कुरा हो’ - Naya Page
‘कलाकार चर्चित हुनु र लोकप्रिय हुनु फरक कुरा हो’
नेपाल टेलिभिजनले सञ्चालन गरेको गायन रियालिटी शो ‘नेपाल तारा’ को उपाधि जितेसँगै दर्शकको मनमा बसेका थिए गायक दीपक लिम्बू । उपाधि हात पारेसँगै नेपाल चलचित्रको पाश्र्व गायनमा दीपक लिम्बूको एकछत्र राज चल्यो, आधुनिक विधाका गीतहरुमा पनि उनको चर्चा उतिकै रह्यो । आफ्नो सफलतामा श्रीमतीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउने उनको नाम संगीत क्षेत्रकै एक पात्रसँग पनि जोडिएर आयो । पछिल्लो समय दीपकका गीतहरु पातलिए । श्रोता– दर्शकले उनको गीत सुन्न–देख्ने पाएनन् । नेपाली गीत संगीतमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएर उदाएका साँगीतिक आकाशका उज्यालो ‘दीप’ दीपक गायन क्षेत्रमा किन एकाध वर्ष गुमनाम भए ? यिनै विषयको सेरोफेरोमा उनै गायक दीपक लिम्बूसँग नयाँपेजले गरेको कुराकानी :
पछिल्लो समय गायनमा केहि निस्क्रिय देखिंदै आउनु भएको छ, के गर्दै हुनुहुन्छ ?
म गायन क्षेत्रबाट हराएको छैन । हराउन आएको पनि होइन र हराउँदिन पनि । पछिल्लो समय फुटकर एल्बम र गीत संगीतकै काम गरिरहेको छु । भर्खर आफ्नै गीतहरुको एउटा संग्रहको काम गरें । फेरि अर्को आउँदैछ उपहार भाग–४ । आलोकश्री दाइसँगको एल्बम अब चाँडै बजारमा आउँदैछ । काम गर्दै जाँदा ढिलो भइहाल्दो रहेछ । संगीतको दौं कहिले रफ्तारमा कहिले अलि धिमा हुनु अन्यथा होइन । तर, मैले मेरो कर्मलाई निरन्तरता दिइरहेको छु ।
काम त गरिरहनु भएको रहेछ । तर, पछिल्लो समय दीपक लिम्बूलाई सुन्न–देख्न पाइएन भन्ने तपाईका फ्यान, शुभचिन्तकहरुको भनाई छ नि ?
म हराएको छैन । मिडिया अनि सामाजिक क्षेत्रमा अलि सक्रिय हुन नसकेको चाँही मलाई पनि महसुस भइरहेको छ । मिडियामार्फत दर्शक–श्रोतालाई जानकारी गराउनु पर्ने थियो, त्यसमा म अलिक चुकेको हुँ । दर्शक श्रोतालाई त्यही भएर हराएको जस्तो लागेको हुनसक्छ । मेरो शुभचिन्तकहरुले मेरो खोजी गर्नु हुँदोरहेछ यसमा खुशी लागेको छ । अर्को कुरा म कुनै लेडिज कलाकारसँग जोडिएको कुरा सत्य होइन् । काम गर्दै जाँदा आउने अपवाद मात्र हो । अन्यथा त्यस्तो केही होइन ।
संगीत बाहेक अन्य पेसा व्यवसायमा पनि हात हाल्न लाग्नु भएको हो ?
संगीत भन्दा मेरो अरु परिचय छैन । म साधरण मान्छे हुँ । नेपाली तारा भन्दा अगाडि म ‘ब्राइटर तिम्रो सुर, मेरो गीत’ मा २०५७ सालमा विजयी भएको थिएँ । म गाउँमा जन्मेको किसान परिवारबाट आएको हुँ । गायन क्षेत्रमै म स्थापित भएको छु । अन्य पेसा व्यवसायप्रति अहिले कुनै लगाव छैन ।
चलचित्रको पाश्र्व गायनमा तपाईको एकछत्र राज नै थियो, अहिले एकाएक पातलिनुको खास कारण के होला ?
हो, पाश्र्व गायनमा मैले धेरै काम गरें । जुन हिसाबमा मैले काम गरिरहेको थिएँ पछिल्लो समय चलचित्र पनि कम बन्यो । त्यसले पनि कम भएको हुनसक्छ । तर, मैले अहिले पनि चलचित्रका लागि गीत गाइरहेको छु । गीतहरुको प्रस्ताव पनि आइरहेका छन् । बीचमा कार्यक्रमको शिलशिलामा ८ महिनासम्म नेपाल बाहिर भइयो । बीचमा कम्यिुनिकेसन पनि गायब हुन पुग्यो । यो बीचमा नयाँ–नयाँ गायकहरु पनि आउनु भयो । नयाँ स्वादका लागि नयाँ गायक राख्ने क्रम पनि भयो । नयाँ प्रयोग हुनु, नयाँ स्वर थपिनु राम्रो पनि हो ।
तपाई आउँदै गर्दाको सांगीतिक क्षेत्रको अवस्था कस्तो थियो ? अहिले कस्तो पाउनु हुन्छ ?
म त्यति धेरै पुरानो मान्छे पनि होइन । तर ५–१० वर्ष अगाडि गाउँहरुमा कार्यक्रमहरु एकदम कम हुन्थे । कलाकारहरुलाई एकदमै धेरै सम्मान गरिन्थ्यो । अहिले पनि गरिन्छ । त्यो बेला कार्यक्रम गर्नु एकदमै गाह्रो पनि थियो । प्राविधिक कठिनाइहरु थिए । कार्यक्रमहरु उस्तै हो तर, अहिले चाँही प्रविधिले सहज भएको छ । पहिले कलाकारको सम्मान पनि राम्रो हुन्थ्यो । रमाइलो हुन्थ्यो । अहिले त्यो अलि कम हुँदै गएको हो कि भन्ने महसुस चाँहि हुन्छ ।
देश–विदेशको सांगीतिक कार्यक्रममा दौडिरहनु हुन्छ । स्वदेश र विदेशका कार्यक्रममा के फरक पाउनु हुन्छ ?
दुई–चार महिना विदेशको कार्यक्रमको शिलशिलामा रहे । विदेशी हाम्रो कार्यक्रम हेर्न धेरै चाँहि नेपाली नै आउनु हुन्छ । यो विदेशी भूमिमा पनि हाम्रो नेपाली कलाकार आए भावनात्मक हिसाबले धेरै माया दिनुहुन्छ । नेपाल र विदेशमा कार्यक्रम त उस्तै हो । तर विदेशमा चाँही देशप्रतिको माया, सद्भाव अलि बढी हुँदो रहेछ । आर्थिक रुपमा पनि कलाकार र आयोजक दुबैलाई विदेशमा कायृक्रम आयोजना गर्दै केहि राम्रो पाएको छु ।
विदेशी भूमिमा पनि हाम्रो नेपाली कलाकार आए भावनात्मक हिसाबले धेरै माया दिनुहुन्छ । नेपाल र विदेशमा कार्यक्रम त उस्तै हो । तर विदेशमा चाँही देशप्रतिको माया, सद्भाव अलि बढी हुँदो रहेछ ।
अहिलेको चर्चित रियालिटीको शो ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ कतिको हेरिरहनु भएको छ ?
हो, म भ्वाइस अफ नेपाल सकेसम्म नियमित हेर्छु । मलाई लाग्छ भ्वाइस अफ नेपाल जस्तो गरिमामय शो नेपालमा आयोजना हुँदा खुशी लागेको छ । त्यो भन्दा अगाडि नेपाल आइडल जस्तो फ्रेण्डस् च्वाइस शो आउनु नै ठूलो कुरा थियोे । प्रतिभाहरुलाई अवसर, प्रेरणा दिन, प्रतिभा उजार गर्न यस्ता प्रतियोगिताले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । निष्पक्ष त हुनैपर्छ । प्रतिष्पर्धी छान्ने भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ भने टप १० मा पुग्नु पनि ठूलो उपलब्धी हो । प्रथम हुनु, दोस्रो हुनु सानोतिनो मेहनत र साधनाले हुँदैन । त्यहाँसम्म आईसकेपछि भने उहाँहरु गीत संगीतका लागि योग्य भइसकेको हुनुहुन्छ । यहि व्यक्ति नै हुनुुपर्छ भन्ने लाग्दैन । सबै राम्रो हुनुहुन्छ ।
तपाईलाई चाँही यस्ता रियालिटी शोहरुमा निर्णायक (जज) को प्रस्ताव आएको छैन ?
मलाई जर्जको प्रस्ताव नै त आएको छैन । भ्वाइस अफ नेपाल मात्रै होइन अरु कुनै पनि प्रतियोगिताका लागि जजकाे प्रस्ताव आयो भने भन्नुहुन्छ ? भनेर चाँहि सोध्नु हुन्छ ? तर म जर्ज हुने बेला भइसकेको छैन कि जस्तो लाग्छ । जर्ज बन्नका लागि अझै मैले गीत संगीतमा बिताउनु पर्छ ।
तपाई जस्तै गीत संगीतमा स्थापित बन्न के गर्नुपर्छ ?
स्थापित कलाकार बन्नका लागि राम्रो गीत गाएर मात्र पनि हुँदैन । गीत संगीत क्षेत्र एक–दुई गीत गाएर स्थापित हुने क्षेत्र पनि हो जस्तो लाग्दैन् । यसका लागि धेरै समय गीत संगीतमा साधन गर्नुपर्छ । जस्तै प्रेमध्वज प्रधान, श्रेष्ठ । उहाँहरु अझै पनि गीत गाईरहनु भएको छ । उहाँहरु गीत संगीतको जिउँदो इतिहास हुनुहुुन्छ । कला संस्कृति जोगाउने कुरा सामान्य होइन । एउटा–दुई गीत गाएर मात्र स्थापित भइँदैन् । चर्चित हुनु र लोकप्रिय हुनु फरक कुरा हो । सबै चर्चित मान्छे लोकप्रिय हुँदैन । चर्चित नभएको लोकप्रिय हुँदैन भन्ने पनि हुँदैन । एउटा गीत गाए चर्चित भयो, १५–२० हरायो । यस्तो शैलीले स्थापित गराउँदैन ।
गीत संगीत क्षेत्र एक–दुई गीत गाएर स्थापित हुने क्षेत्र पनि हो जस्तो लाग्दैन् । यसका लागि धेरै समय गीत संगीतमा साधन गर्नुपर्छ । जस्तै प्रेमध्वज प्रधान, श्रेष्ठ । उहाँहरु अझै पनि गीत गाईरहनु भएको छ । उहाँहरु गीत संगीतको जिउँदो इतिहास हुनुहुुन्छ । कला संस्कृति जोगाउने कुरा सामान्य होइन
शुरुवात दिनमा तपाईलाई अग्रज कलाकारको साथ कस्तो थियो ?
मलाई अग्रज कलाकारहरुको साथ संघर्षको चरणमा थियो र अहिले पनि छ । मैले जोसँग भेटघाट गरे, सल्लाह लिएँ । उहाँ अग्रज कलाकार, गुरु र साथीहरु सबैले साथ दिनु भयो ।
अहिलेको सांगीतिक व्यापार चाँहि कस्तो देख्नु हुन्छ ?
सांगीतिक व्यापारमा धेरै परिवतन आइसकेको छ । १०–१२ वर्षअघिसम्म हारालुछ विक्री हुने सिडी–डिभिडी हराइसके भन्दा पनि हुन्छ । तर, अहिले युुट्युबले गर्दा केहि राहत मिलेको छ । डिजिटल प्रविधिले गर्दा नयाँ कलाकारलाई सहज भएको छ । विशेष कलाकारको प्रमुख आयस्रोत त स्टेज र्कायक्रम नै हो । गीत–संगीतको धार त्यही हो । प्रस्तुती फरक गर्ने मात्र हो । दर्शक र श्रोताले मन पराइरहनु भएको छ । अझै पनि मन पराई दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । यसका लागि आफ्नो तर्फबाट पनि मेहनत गर्न जरुरी छ ।
पूरा संवाद भिडियोमा हेर्नुहोस्
नम्रताको ‘नमिठो’ प्रेम यात्रा